Neymar Jr & Kylian Mbappe oo ka maqnaan doona Kooxda Paris Saint Germain kulanka ay la leeyihiin Real Madrid…(Maxay tahay sababtu?) – Gool FM
(Paris) 16 Sebt 2019. Paris Saint-Germain waxaa ka maqnaan doona labada xiddig ee Neymar Jr iyo Kylian Mbappe kulanka habeenka Arbacada ee Champions League oo ay kula ciyaarayaan Real Madrid caasimadda Faransiiska.
Neymar oo si xooggan loola xiriirinayay Barcelona intii lagu jiray suuqii xagaaga ayaa gool u dhaliyay PSG dhammaadka isbuucaan, isagoo la yimid gool soo daahay kulankii horyaalka Ligue 1 oo ay kooxdiisu wajahday naadiga Strasbourg.
Xiddiga reer Brazil ayaa qaatay saddex kulan oo ganaax ah oo tartammada Yurub ah xilli ciyaareedkii hore, si kastaba ha ahaatee, sababta uu ku muteystay ganaaxaasna waxa ay tahay hadalladii laga yiri garsooraha kulankii guuldarradii ugu dambeysay ee kooxda reer France ka soo gaartay naadiga Manchester United ee wareeggii 16-ka koobka horyaallada Yurub.
Dhanka kale, Mbappe ayaa dhaawac ku seegay labadii kulan ee ugu dambeysay ee PSG isagoo dhaawac muruqa ah qaba, 20-sano jirkaan ayaana diyaar u noqon doonin inuu wajaho kooxda tababare Zinedine Zidane ee Los Blancos oo ay Magaalada Paris kula ciyaari doonaan.
PSG ayaa haatan hoggaanka u haysa horyaalka Ligue 1, iyagoo leh 12 dhibcood shantii kulan ee ay ciyaareen, laakiin waxaa guuldarro 2-1 ka soo gaartay Rennes bishii hore, halka sida aan soo sheegnay kooxdu ay u baahnayd dadaal soo daahay oo Neymar ah si ay uga adkaadaan Strasbourg bilawgii isbuucan.
Club Brugge iyo Galatasaray ayaa qeyb ka ah Group A ee tartanka Champions League iyagoo guruubkan kula jira PSG iyo Real Madrid, kuwaasoo loo arki doono inay yihiin kuwa ugu cadcad inay u soo baxaan wareegga 16-ka koobka horyaallada Yurub.